Falanqay: Kooxehee U Soo Gudbi Doona Wareega 8 Dhamaadka Champions League – Kooxda.com
Home 2017 December France, Ingiriiska, Italy, Jarmalka, Spain, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino Falanqay: Kooxehee U Soo Gudbi Doona Wareega 8 Dhamaadka Champions League
Falanqay: Kooxehee U Soo Gudbi Doona Wareega 8 Dhamaadka Champions League
Waxa lasoo saaray isku aadka champions league wareegiisa 16-ka iyada o ay ka soo bexeen kulamo xiiso leh oo ay ka mid yihiin PSG vs Real iyo Chelsea vs Barca.
Isku aadka ayaan ahayn mid isku dheeli tirnayn sidii aynu uga baranaya wakhtiyadii ugu dambeeyay iyada oo laga yaabo in kooxo waaweyn wakhti hore ka baxaan halka kooxo yar-yari ay u gudbi karaan wareega 8 dhamaadka.
Hadaba waxa aanu warbixintan ku soo bandhigi doonaa falanqaynta dhamaan kulamada soo baxay ee wareega 16-ka.
Juventus Vs Tottnham:
Waxa laga yaabaa in ayna lahayn shacbiyad adduun weynaha ah marka loo eego Juventus laakiin marka loo eego qaab ciyaareedkan labada kooxood rajadooda u soo bixista wareega 8 dhamaadka ayaa ah mid isku mid ah maadama ay Tottenham qaab ciyaareed heer sare ah soo bandhigtay tartanka champions league.
Rajada Juventus ee u soo bixitaanka wareega xiga ayaa ku xiran sida ay u hagaajiso daafaceeda, kulamadii ugu dambeeyay goolal lagama dhalin waxana laga yaabaa in ay dib u heleen isku dheeli tirnaantii daafacooda dhanka kale kooxda Juventus ayaa haysata weeraryahadanada ugu fiican yurub halka ayna Tottenham daafaceedu sidaas u sii adkayn.
Basel Vs Man city:
Waxa ay haatanba u muuqataa kulanka ugu fudud iyo waliba in ay Man city durba sii goosatay tigidhkeeda wareega 8 dhamaadka marka loo eego farqiga aadka u weyn ee u dhexeeya labada kooxood Kooxda Man city ayaa ku nool wakhti fiican iyada oo koox kasta kabaha la dulmarta.
Fikirk ahaanta dadka adan kooxda ayaa loo badinayaa in aanay kulankan wax lama filaan ah ka jiri doonin oo ay kooxda citizen si dhib yar ku dhaafi doonto Kooxda Basel.
Marka loo eego dhanka awooda iyo taariikhda waxa in ay wareega 8 dhamaadka u soo bixi doonto u sharaxan kooxda Liverpool marka loo eego weerarka ay haysato kooxda Liverpool, Klopp ayaa kooxda ku haysata weeraryahano awood u leh in ay dhaafaan daafac kasta iyo duruuf kasta, laakiin arinta war-warka keenaysa ayaa ah daafaca xun ee Liverpool maadama ay kooxda Porto leedahay weerar adag sidaa darteed waxa ay u badantahay in ay noqoto ciyaar dhan walba u furan.
Sevilla Vs Man United:
Waxa ay u muuqataa in aanu nasiibku saacidin kooxaha reer Spain kadib markii ay kooxaha La Liga ku dheceen kulamo adag Sevilla ayaa iyadana gadhka laga galiyay kooxda Man United oo ku socota awood aan caadi ahayn marka la joogo tartanka champions league.
Taariikhda ayaa sheegaysa in Jose Mourinho uu si fiican u yaqaano in uu la macaamilo kulamada noocan oo kale ah way adagtahay in la arko Jose Mourinho oo ku hor kufaya koox sevilla oo kale la qaab ciyaareed ah, laakiin Sevilla ayaa kulamada qaar soo bandhigtay qaab waali ah iyada oo loo maleeyo in ay jiidhi karaan koox kasta oo ka hor timaada halka ay kulamada qaarna u muuqato mid aan xitaa kooxaha heerka 1-aad ka badin karin.
Waxa ay u muuqataa kulanka ugu adag ee sida weyn loo sugayo marka loo eego xiddigaha waaweyn ee magaca leh ee labada kooxood u kala ciyaaraya laakiin waxay ay u muuqataa in ayna labada kooxoodba ku faraxsanayn isku aadkaas.
Real Madrid ayaa ku jirta wakhti adag oo horyaalka ah xitaa tartanka champions league ayayna soo muujin wajigeeda dhabta ah mar-marka qaar laakiin waxa jirta 3 sababoo oo aynu guusha ugu saadaalinayno kooxda Real Madrid waxana ay kala yihiin khibrada tartanka,Joogitaanka Ronaldo oo tartanka wacdaro ka dhiga iyo tababaraha kooxda PSG oo aan aqoonin sida guusha looga gaaro Real Madrid.
Hadii ay Real Madrid dib u hesho ama u soo celiso qaab ciyaareedkii lagu yaqaanay qabta dambe ee xilli ciyaareedka, muhiimada PSG ayaa noqon doonta mid adag, marka loo eego in ay kooxda PSG difaac ahaan dhibaatoonayso, halka fursada PSG ee ugu gudbida wareega 8 dhamaadka ay ku xirantahay in uu dib u dhoco weerarka Real iyo daafacooduba.
Shakhtar Vs Roma:
Waa kulan xiiso leh inkasta oo ayna labada kooxoodba taageerayaal aad u badan lahayn dhanka soomalida laakiin labada kooxood ayaa ku jira qaab ciyaareed cajiib ah iyaga oo labadooduba kabaha la soo dul maray laba kooxood oo ah kuwa ugu waaweyn premier league una sharaxan in ay meel fog ka gaaraan tartanka.
Waa Final kale oo horay u soo dag-dagay oo aynu ku daawan doono wareega 16-ka waa kulan Classico Ah oo aynu horay u soo daawanay makhraatina ka soo noqonay waxa ay samayn karaan marka ay garoonka isugu yimaadaan.
Barcelona ayaa hogaanka u haysa horyaalkeeda waxana ay kaalinta 1-aad kaga soo baxday Group-keeda laakiin hadii aynu runta ka hadalno kooxda ayaa wali u baahan in ay si fiican isku muujiso ilaa haatan maynu arka kooxdii Barcelona ee laga baqi jiray.
Dhanka kale kooxda chelsea ayaa ku jirta wakhti adag waxana ay guuldaro la kulantay kulamo badan oo xilli ciyaareedkan ah tartamada oo dhan laakiin Antonio Conte ayaa haysta xalal kale oo uu dib ugu soo celin karo kooxdiisa qaabka kooxda.
Inkasta oo qaab ciyaareedka Barcelona shaki la galinayo hadana waxa ay wali haysataa Lionel Messi oo ku jira qaab ciyaareed aad u fiican waxana uu noqon karaa go,aamiyaha kulankaas laakiin Lionel Messi ayaan aqoon sida loo taabto goolka chelsea. waxa aan oran karnaa in ay kooxda Barcelona tahay kooxda u sharaxan in ay soo baxdo laakiin wax walba waa laga filan karaa kubada cagta.
Bayern Munic Vs Besiktas:
Natiijooyinka kooxda reer Turkey ayaa been kuu sheegaya maadama ay Group-ka ay ku dhacday uu ahaa mid aad u fudud, sidoo kale kooxda ayaa wakhti adag ku jirta maadama ay kaalinta 4-aad kaga jirto horyaalka Turkey oo ah horyaal aad u jilicsan.
Bayern Munich ayaa si weyn u soo laabatay tan iyo markii dib loogu soo celiyay tababare Jupp Heynckes, waxa jira isku dheeli tirnaan kooxda ah waxana ay hayasataa xiddigo go,aamin kara kulanka.